Soomaaliya Oo Lagu Eedeyay Inay Xad-gudub ku hayso Barokaceyaasha Muqdisho | Salaan Media
Soomaaliya Oo Lagu Eedeyay Inay Xad-gudub ku hayso Barokaceyaasha Muqdisho
MUQDISHO (SM)-Hay’adda xuquuqul aadanaha ee Amnesty International ayaa ku eedeysay dowladda Soomaaliya, inay si xoog ah uga rartay tobannaan kun oo barkacayaal ah kaamam ay ku noolaayeen oo ku yaalla magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya.
Siday faafisay shabakadda Hiiraan Online oo Taabacsan dawladda Soomaaliya, Warbixin ay hay’addu soo saartay maanta, ayay ku sheegtay in arrintani ay xad-gudub weyn ku tahay xuquuqda aadanaha, iyadoo xustay in ciidanka dowladdu ay dileen laba qof oo ka mid ahaa dadka ka soo horjeestay inay ka baxaan kaamamkii ay ku noolaayeen.
“370,000 oo qof oo hore uga soo barakacay abaaro, macluul iyo colaadihii Soomaaliya ka dhacay ayay dowladdu si khasab ah uga rartay kaamam ay ku noolaayeen oo Muqdisho ku yaalla,” ayay hay’addu warbixinteeda ku tidhi.
Dowladda Soomaaliya ayaa bishii January ee sannadkan ku dhawaaqday qorshe looga rarayo caasimadda barakacayaasha, iyadoo xustay inay dejin doonta duleedyada caasimadda.
Amnesty ayaa warbixinteeda ku xustay in dad ay la xidhiidhay ay u sheegeen in laga burburiyay guryahoodii iyo alaabahoodii lagana saaray halkii ay ku noolaayeen iyadoo aan aqoon meel ay aadaan.